Ungawabuka kanjani amafilimu ahamba phambili wemiklomelo yeGoya 2020 online | Izindaba zamagajethi
Sesivele sinesicoco semiklomelo yeGoya 2020, umkhosi lapho cinema yaseSpain igqoka khona minyaka yonke futhi evuza umsebenzi wabo bonke abahlanganyeli ngaphambili nangaphandle kwamakhamera wefilimu. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi awukwazanga ukujabulela amanye noma wonke amafilimu awine imiklomelo, kepha ungakhathazeki, ngoba futhi i-Actualidad Gadget ilapha ukukukhiphela ama-chestnut emlilweni ukuze uxoxe ehhovisi mayelana izimpumelelo zakamuva zama-cinema aseSpain. Sikulethela umhlahlandlela nabaphumelele kakhulu emiklomelweni yeGoya 2020 nokuthi uwabuka kanjani ama-movie abo online.
1 Ifilimu Ehamba phambili: Ubuhlungu Nodumo
2 Umlingisi Osekela Kakhulu: Ngenkathi Impi Iqhubeka
3 Umlingisikazi Osekela Kakhulu: Umsele Ongapheli
4 Amanye ama-movie ungawabuka ku-inthanethi
5 Uhlu lwabaphumelele kumiklomelo yeGoya 2020:
Ifilimu Ehamba phambili: Ubuhlungu Nodumo
I-movie kuqondiswe nguPedro Almodóvar futhi lokho kube nokusebenza okuhle kwenkanyezi yaseHollywood Antonio Banderas ibe nokuhlonishwa okuningi, empeleni ithole iGoya njengomqondisi ohamba phambili (uPedro Almodóvar); Umlingisi Ohamba Phambili (u-Antonio Banderas); Umlingisikazi Osekela Kakhulu (uJulieta Serrano); I-Screenplay Ehamba Phambili Ehamba Phambili (Pedro Almodóvar); Ukuhlela okuhle kakhulu (iTeresa Font) nomculo ohamba phambili wokuqala, akukho okunye futhi okuncane ngenkanyezi eyiqiniso yefilimu yamaGoya 2020 Awards, akuyona engaphansi kokuzungezwa abaculi abaningi.
LINK ukuze ubuke ku-inthanethi Ubuhlungu nodumo.
Le filimu ikhishwe ngoMashi 2020 futhi manje isiyatholakala kuma-platforms asakaza njenge-Netflix, yize ingabuye iqashwe kwamanye amapulatifomu afana neFilmin, iVodafone TV, iRakuten TV, iGoogle Play kanye neApple iTunes. Kodwa-ke, amanye ama-cinema asawakhombisa noma asazowakhombisa futhi ngokunikezwa impumelelo etholakele. Ubuhlungu noDumo kumayelana noSalvador Mallo, umqondisi wamafilimu ngamahora aphansi futhi abukeze impilo yakhe kusukela eminyakeni yama-60s, ngabe uzophuthelwa i-movie wonke umuntu akhuluma ngayo? Angiqiniseki.
Umlingisi Osekela Kakhulu: Ngenkathi Impi Iqhubeka
I-movie ye- Alejandro Amenábar ibuye ibe nendawo yayo kumaGoya 2020 Awards, Ibimiswe njengomunye wabaphakanyiswe kakhulu, futhi empeleni ithole eminye imiklomelo: Umlingisi Osekela Kakhulu (u-Eduard Fernández); Isiqondisi esihle kakhulu sokukhiqiza (Carla Pérez de Albéniz); Isiqondisi esihle kakhulu kwezobuciko (uJuan Pedro de Gaspar); Idizayini enhle kakhulu yezingubo (Sonia Grande) kanye nokwakheka okuhle nokufakwa izinwele. Ngaphandle kokungabaza, elinye lamafilimu aklonyeliswe kakhulu futhi elinamagama aphakanyisiwe kakhulu belingalahleka kumhlahlandlela wethu ukubona amafilimu amahle kakhulu eGoya Awards 2020.
LINK ukuze ubuke ku-inthanethi Ngenkathi Impi Iqhubeka.
Ngenkathi impi iqhubeka kungumbono weMpi Yombango yaseSpain kusukela ekubukeni kweMíguel de Unamuno odumile. Ngaphezu kwakho konke, kugxila ekutheni umbhali usesikhathini sokunquma phakathi kwezinhlangothi zombili nokuthi umphakathi waseSpain wangaleso sikhathi wawuhlukaniswe kakhulu kanjani. Ifilimu ingajatshulelwa kuMovistar + kusukela namhlanje, ekusakazeni nasekuphindisweni okwenziwa isonto lonke ngeziteshi zayo ze-cinema. Kunoma ikuphi, le filimu isatholakala kumabhayisikobho amaningi kuleli.
Umlingisikazi Osekela Kakhulu: Umsele Ongapheli
Akukho okunye futhi akukho ngaphansi kokuphakanyiswa kwama-15 Umsele ongapheli, igcina ngokuthatha okulandelayo: Umlingisi Ohamba phambili Ohamba phambili (Belén Cuesta) neBest Sound. Kunzima ukulwa nalezi ezimbili ezedlule. Kulokhu, umsebenzi ka-Aitor Arregi, uJon Garaño noJosé Mari Goneaga ube nokuqashelwa okubalulekile yize engazange athole imiklomelo eminingi, futhi bekubonakala sengathi impi kaDavid yokulwa noGoliyathi. Nakulokhu futhi le movie igxila esakhiweni seMpi Yombango yaseSpain ebonakala imfashini impela.
Ikhuluma ngomshado osekufihlwe iminyaka engaphezulu kwamashumi amathathu ngenxa yokwesaba kwabo ukuphindisela okungenzeka uhlangothi oluwinile lungahamba nakho ngemuva komphumela wempi. Sizokwazi ukujabulela le filimu kukhathalogi yeNetflix kusuka ngoFebhuwari 28, ngendlela efanayo ezotholakala ngokuqasha kuFilmov kusuka ngoMashi 11 ozayo. Khonamanjalo, asinakho okunye esingakwenza ngaphandle kokuya kumidlalo yaseshashalazini uma sifuna ukwazi ukukhuluma ngakho.
Amanye ama-movie ungawabuka ku-inthanethi
Okushisayo: Kutholakala kuFilmin kusuka ngoFebhuwari 14.
Ngaphandle: Kutholakala kuphela kumatiyetha okwamanje.
UKlaus: Kutholakala ku-Netflix.
I-Buñuel ku-labyrinth yezimfudu: Itholakala ku-Movistar + naku-Apple iTunes.
Uhlu lwabaphumelele kumiklomelo yeGoya 2020:
Ukuqondiswa Okuhamba phambili: Ubuhlungu Nenkazimulo
Ukuqondiswa Okusha Okuhamba phambili: Indodakazi Yesela
Umlingisi Ohamba phambili: U-Antonio Banderas Wobuhlungu Nenkazimulo
Umlingisi ohamba phambili: UBelén Cuesta weLa tinchera infinita
Umlingisi Osekelayo Ohamba phambili: U-Eduard Fernández weSikhathi sempi
Umlingisi Osekela Kakhulu: UJulieta Serrano Wobuhlungu Nenkazimulo
Umlingisi Omusha Ohamba phambili: Enric Auquer for Who Kills Iron
Umlingisi Omusha Ohamba phambili: UBenedicta Sánchez weLo que arde
Isikrini sokuqala esihle kakhulu: uPedro Almodóvar wezinhlungu nodumo
I-Screenplay Ehlelwe Kakhulu: UDaniel Remón noPablo Remón, Abangaphandle
Ifilimu Egqwayiza Kakhulu: IBuñuel kuLabyrinth of the Turtles
Ifilimu Elihamba Phambili Elihamba Phambili: U-Ara Malikian: Impilo Phakathi Kwezintambo
Ifilimu Ehamba phambili YaseYurophu: Les Miserables (France)
Ifilimu ehamba phambili ye-Ibero-American: I-Odyssey of the Giles (Argentina)
Umqondisi Ohamba Phambili Wezithombe: UMauro Herce weLo que arde
Isiqondisi Esiphezulu Sokukhiqiza: UCarla Pérez de Albéniz weSikhathi sempi
Ukuhlela Okuhle Kakhulu: Ifonti kaTeresa Yezinhlungu Nenkazimulo
Ukuqondiswa Kwezobuciko Okuhamba phambili: UJuan Pedro de Gaspar weSikhathi sempi
Umklamo Wezimpahla Ohamba Phambili: USonia Grande weSikhathi Sempi
I-Makeup Engcono Kakhulu ne-Hairstyling: Ngenkathi Impi Iqhubeka
Umsindo ohamba phambili: Umsele ongapheli
Imiphumela Ekhethekile Engcono kakhulu: I-Hole
Umculo Wokuqala Ohamba Phambili: Ubuhlungu Nodumo
Ingoma yokuqala yangempela: Javier Rubial for Out in the open
Ifilimu Elifushane Eliqanjiwe Elihamba Phambili: USus de Síndria
Ifilimu emfushane kakhulu eyiDocumentary: Impilo yethu njengezingane zababaleki eYurophu
Ifilimu Elifushane Elihamba Phambili: Madrid 2120
Umklomelo WeGoya Wokuhlonipha: IPepa Flores (Marisol)
Sithemba ukuthi lo mhlahlandlela ukusizile ukuthi uthokozele konke okuqukethwe okutholakala ku-inthanethi ukubona ama-movie amahle kakhulu we Imiklomelo yeGoya 2020.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » Ungawabuka kanjani online amafilimu amahle kakhulu wemiklomelo yeGoya 2020
Ungalawula kanjani iselula yezingane zethu ku-Android naku-iOS